Weblog.com.np | Author Subin Shrestha
Posts written by Subin Shrestha
ए झरी, कस्तो मनपरि
आवाज श्रेष्ठ झरी ! तिम्रो कस्तो मनपरि थाहा छैन् तिमीलाई ? कोही विद्यालय पुग्नुपर्छ कोही कार्यालय कसैको आज भेटघाट होला मेरैपनि आजै विशेष काम छ
शब्दहरु शुरु गर्ने कठिनाई भईरहेको छ । यतिखेर मन र मतिष्कपनि असमान स्थितीमा छन् । मन हिजैबाट टुकि्रएको छ । आफ्नै मान्छेले जब दुई शब्दमा संसार ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरा उठायो । आफुलाई सम्हाल्दै वास्तविकता बुझाउन उनीलाई भगवानको लीला सम्झाउन प्रयत्न गरे । संसारमा व्यक्ति बिशेषले चाहेर यस्ता कुरा हुदैनन् । श्रूष्टिका साचालक मान्छे होईनन् । दोहारो सम्बादमा उत्पन्न डरले होला । सम्वादमा आएका शब्दहरु
जीवनका धैरै पाटाहरुलाई उखानमा मिसाउने चलन नै छ । आमाबुबाको मन छोराछोरी माथि छोराछोरीका मन ढुङा माथि । यसो नभएको भए ८७ वर्षीय सावित्री नेपाल किन आफ्नो राम कहानी बोकेर जीवनको अन्तिम शान्ति खोजेर स्वतन्त्र बोलिरहेका छन् । स्वर्गीय स्वरसम्राट नारायण गोपालको सम्झनापनि यहाँनिर बल्झिएको छ । लौ सुन म भन्छु मेरो रामकहानी । एकदिनको घाम सयौंदिनको पानी ॥ प्रसंग उही एक जिन्दगीको । जुन चलिरहन्छ र समयसँगै